ကလေးတွေကို ကယ်လ်ဆီယမ်တိုက်ရင် – Healthy Life Journal
Q. ကလေးတွေမှာ တိုက်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ ကယ်လ်စီယမ်ကကော အရိုးအတွက် ဘယ်လိုအကျိူးကျေးဇူးကို ပေးနိုင်ပါသလဲ ဆရာ။
ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း (အရိုးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မှ ပွနျလညျဖွကွေားပေးပါသညျ။
A. ကလေးတွေမှာ ကယ်လ်စီယမ် တိုက်တာကြောင့် အရိုးကျိုးနှုန်းလျော့ကျတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကယ်လ်စီယမ်နဲ့ အရိုးကျိုးတာက ကလေးတွေမှာ မဆိုင်ပါဘူး။ ကလေးအသက် ၁၂-၁၃နှစ်အရွယ်မှာ အရိုးထုထည် အမြင့်ဆုံး(Maximum Accumulation of Bone Mass)ရအောင် ကယ်လ်စီယမ်ကို စုဆောင်းထားရင် အသက်၂၀-၂၅နှစ်အရွယ် (အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးတွေ)မှာ အရိုးထုထည် အများဆုံးအခြေအနေမှာ ရှိနေပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ငယ်ငယ်ကတည်းက ကယ်လ်စီယမ်ပါတဲ့ အစားအသောက်တွေ ကျွေးဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု လုပ်ခိုင်းရပါမယ်။ အထူးသဖြင့် မျိုးရိုးထဲမှာ အရိုးပါးရောဂါရှိရင် ကလေးတွေကို အထူးဂရုစိုက်ပေးပြီး လိုအပ်တဲ့ ကယ်လ်စီယမ်ဓာတ်ရအောင် ကျွေးသင့်ပါတယ်။
Related Items:Calcium, Children